Kune waanogona kunetsekana naye, Isu pano tazivisa kuti kune matatu chete mawebhusaiti epamutemo eAngelBiss, anoti www.angelbisshealthcare.com, www.angelbisscare.com uye https://szcarvindu.en.made-in-china.com/. Iwe unofanirwa kunyatso kuona uye chenjera iwo ma URL anowanikwa mune mamwe mazita mazita, an ...Verenga zvimwe »
Angelbiss akabudirira kunyoresa chiratidzo cheUS
Post nguva: 02-23-2021
Angelbiss haisi chete inozivikanwa inozivikanwa pasi rese asi zvakare ine mutoro chiratidzo. Isu tinotangira pakuva neyakavanzika yekutsvagisa nekusimudzira zvigadzirwa zvehunyanzvi kusvika mukuwana kuzivikanwa mune zvese zvinhu Aya maitiro ekuenderera mberi nekuvandudza mhando yezvigadzirwa zvavo. Munguva pfupi yapfuura, Angelbiss akaunza ...Verenga zvimwe »
Kunaka kweChina Inotakurika Inotakurika Suction Machine (AC, DC, Mabhatiri)
Post nguva: 02-14-2021
Angelbiss yakagadzira Rechargeable Portable Suction Machine (AC, DC, Mabhatiri): AVERLAST 25B. Izvo hazvine chete zvakanakira Angelbiss mamwe maviri maSuction Machine zvishandiso: kaviri anti-kufashukira dziviriro sisitimu, yakanangana plug-in bhodhoro system, imwechete chete Push kutora bhodhoro 1400ml kugona ...Verenga zvimwe »
Angelbiss akabudirira kunyoresa chiratidzo cheGerman
Post nguva: 02-07-2021
Angelbiss haisi chete inozivikanwa inozivikanwa pasi rese asi zvakare ine mutoro chiratidzo. Kubva pachedu kutsvagisa uye kusimudzira kwehunyanzvi zvigadzirwa, kune kuzivikanwa kwezvinhu zvese. Aya maitiro ekuenderera mberi nekuvandudza mhando yezvigadzirwa zvavo. Isu tinoremekedza uye tinotarisira kune wese musiki uye R&D p ...Verenga zvimwe »
Yakagadzika okisijeni jenareta chengetedzo kutadza kukurukurirana boka
Post nguva: 01-27-2021
2020.11.05, Angelbiss akagadzira yakachengeteka kukundikana boka rekukurukurirana pane Facebook pasocial chikuva. Nei tichifanira kumisikidza boka rekukurukurirana nezvekukundikana kwekuchengeteka kwemajenareta emagetsi? Nekuti kana edu ekupedzisira vatengi vagamuchira chigadzirwa, tsvaga dambudziko kana mutengesi anosangana neyakagadziriswa pro ...Verenga zvimwe »
Inotakurika okisijeni concentrator inogona kushandiswa pabani?
Post nguva: 01-17-2021
Angelbiss inotakurika okisijeni concentrator inogona kumhanya pamamirioni gumi nemashanu. Kuratidza kuti iyo Angelbiss inotakurika okisijeni concentrator inogona kushandiswa nevatengi vanogara munzvimbo dzakakwirira dzakakwirira. Muna 2018, timu yeAllbiss 'R & D yakatambanudza matunhu mazhinji kuPotala Palace (15,000 tsoka) muTibet, China. Thi ...Verenga zvimwe »
Post nguva: 01-06-2021
Mhoro vadikani vadyidzani, Zvakanakira kushuvira iwe nebhizinesi redu pagore idzva ra2021. Isu tinofara zvakare kuve negore renyu idzva zvido zvechikwata chedu nebhizinesi mumazuva apfuura. Tinogona kuve nemaonero akasiyana mune mamwe mapoinzi, asi tarisiro yedu yakafanana. Tinotenda isu tese tiri kubudirira kukuru kuita yedu pr ...Verenga zvimwe »
HAPPY GORE ITSVA 2021 !!!!
Post nguva: 01-01-2021
2020 igore rakakosha, gore rino takawana zvinhu zvisingawanzoitika, COVID-19 yakatsvaira nyika, Kobe Bean Bryant akasiya nyika ino, kuratidzira kunopokana nemhirizhonga kwakapera mumhirizhonga, sarudzo zhinji muUnited States, Brexit, nezvimwe. iri kuswedera, uye kusuwa kwese kuchapera zvishoma nezvishoma ...Verenga zvimwe »
0.1%, jenareta inogadzira inochinja inongova 0.1%
Post nguva: 12-20-2020
Iwe unoziva here kuvapo kweiyo oxygen jenareta iyo kuchinja kuri kungori 0.1%? AngelBiss ndiye wekutanga okisijeni jenareta kutarisisa pane kuchinja. Wokutanga mugadziri wemakemikari emagetsi anokwanisa kudzora mwero wekuchinja mukati me0.1%. ANGEL5S inoteedzana yemhepo inogadzira jenareta ine yakagadzikana ...Verenga zvimwe »
Kubudirira kuri pamusoro pe90%, ndeye kupokana kana kununura?
Post nguva: 12-17-2020
Pfizer Pharmaceuticals yeUnited States uye BioNTech yekuGerman vakazivisa batch yekutanga yezvibodzwa zvechikamu chechitatu chemakiriniki ekuedzwa kweiyo korona nyowani pamberi peUS stock market, ichiratidza kuti kushanda kwayo kunopfuura 90% Kambani yeUS yakaitisa Phase III kiriniki miedzo ne ...Verenga zvimwe »
Mazuva matanhatu chete, Zadzisa matatu pcs 60LPM hyperbaric okisijeni jenareta
Angelbiss 60LPM yakakwira-yekumanikidza oxygen jenareta inogona kupa oxygen kumakiriniki madiki. Inofananidzwa neakajairika masirinda eoksijeni, Angelbiss oxygen jenareta yakachengeteka uye yakavimbika. Panguva imwecheteyo, Angelbiss oxygen jenareta inogona kudzikisa mutengo, kudzikisira kumanikidza uye kusangana ne mor ...Verenga zvimwe »
Kushanda kweokisijeni jenareta mumaindasitiri munda
Pressure swing adsorption okisijeni jenareta rave richishandiswa zvakanyanya mumaindasitiri minda senge ozone jenareta, girazi kugadzira, aquaculture, uye simbi yekunyungudika nekuda kwekukurumidza kwayo kutanga-kumusoro, kushomeka kwesimba kushandiswa, mashandiro ari nyore uye nyore kugadzirisa. 1.Kushandiswa kweAngelbiss oxygen generat ...Verenga zvimwe »
Kune waanogona kunetsekana naye, Isu pano tazivisa kuti kune matatu chete mawebhusaiti epamutemo eAngelBiss, anoti www.angelbisshealthcare.com, www.angelbisscare.com uye https://szcarvindu.en.made-in-china.com/. Unofanira c ...
Angelbiss yakagadzira Rechargeable Portable Suction Machine (AC, DC, Mabhatiri): AVERLAST 25B. Izvo hazvine chete izvo zvakanakira Angelbiss mamwe maviri maSuction Mashini michina: kaviri anti-kufashukira dziviriro sisitimu ...
2020.11.05, Angelbiss akagadzira yakachengeteka kukundikana boka rekukurukurirana pane Facebook pasocial chikuva. Nei tichifanira kumisikidza boka rekukurukurirana nezvekukundikana kwekuchengeteka kwemajenareta emagetsi? Nekuti kana edu ekupedzisira vatengi ...
Mhoro vadikani vadyidzani, Zvakanakira kushuvira iwe nebhizinesi redu pagore idzva ra2021. Isu tinofara zvakare kuve negore renyu idzva zvido zvechikwata chedu nebhizinesi mumazuva apfuura. Tinogona kuve nemaonero akasiyana mune mamwe mapoinzi ...